သတင်း - ပုံသွန်းအပေါ်ယံပိုင်းနိဒါန်း
Casting coating သည် မှို သို့မဟုတ် အူတိုင်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသော အရန်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သွန်းလုပ်ခြင်း၏ မျက်နှာပြင် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 3000 ကျော်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရှေးဦးသွန်းလုပ်သည့် လက်သမားဆရာများသည် သွန်းလုပ်ခြင်းနည်းပညာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သိသာထင်ရှားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုတစ်ခုအဖြစ် သတ္တုသွန်းလုပ်ခြင်းကို အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သတ္တုထုထည်အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးလာလျက်ရှိသည်။၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် စက်ရုံအများအပြားသည် ထုတ်လုပ်မှု ပြဿနာများကို ရှုမြင်ကာ အပေါ်ယံ သုတေသနပြုရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။
ပထမဦးစွာ coating ၏အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာနှင့်အစွမ်းသတ္တိ
ယခုအခါ၊ အစေးချည်နှောင်ထားသောသဲအတွက်အသုံးပြုသော coating သည် ၎င်း၏မြင့်မားသောအစိုင်အခဲပါဝင်မှုနှင့် မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုလိုအပ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရှေးယခင်က ရွှံ့သဲအစိုအမျိုးအစားကို ဆေးမသုတ်ဘဲ ရွှံ့သဲခြောက်အမျိုးအစားကိုသာ သုတ်လိမ်းသည်။ရွှံ့စေးသဲခြောက် အမျိုးအစား၏ ခိုင်ခံ့မှု အလွန်နည်းပါးပြီး သွန်းလုပ်ခြင်းများသည် အရေးကြီးသော သို့မဟုတ် ကြီးမားသော သွန်းလုပ်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် အလွှာတစ်ခုအဖြစ် သီးခြားဖွဲ့စည်းရန်သာမက အောက်ဖော်ပြပါ မျက်နှာပြင်၏ စိမ့်ဝင်မှုဖြစ်စေသော ကာက်စ်အလွှာများ လိုအပ်ပါသည်။ သဲ3~4ပါဝင်သော၊ မှိုမျက်နှာပြင်ကို မြှင့်တင်ထားသောကြောင့် ဆေး၏ viscosity သည် အလွန်မြင့်မား၍ အစိုင်အခဲပါဝင်မှု မမြင့်မားပါ။
2. စွမ်းအင်ချွေတာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
ရေနှင့်အယ်လ်ကိုဟောများကို အဓိကအားဖြင့် အပေါ်ယံအလွှာများတွင် အသုံးပြုသော အရည်များ။20 ရာစုနှစ် 70 ~ 80 အချိန်အသုံးပြုခဲ့သော၊ အခြောက်ခံရန် သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းရန် မလိုအပ်ဘဲ သုတ်ဆေးသယ်ဆောင်သူအဖြစ် dichloromethane ကဲ့သို့သော ကလိုရင်းထုတ်လုပ်သည့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ဗောက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။၎င်း၏ အဆိပ်သင့်မှု၊ လေထုထဲသို့ အငွေ့ပျံသွားကာ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ၎င်း၏ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားမှုကြောင့် ယခုအခါတွင် ၎င်းကို အသုံးမပြုတော့ပေ။
သွန်းလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ကုန်ကြမ်း အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အဆက်မပြတ် ဖြည့်စွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
1. ရုန်းအား အစုလိုက်
Refractory aggregate သည် အပေါ်ယံပိုင်းရှိ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အရည်အသွေးနှင့် ရွေးချယ်မှုသည် အပေါ်ယံပိုင်းအသုံးပြုမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု ကြီးမားပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အစုလိုက်ရွေးချယ်ရာတွင်၊ စက်မှုသန့်ရှင်းရေးနှင့် စီးပွားရေးတွင် ပိုမိုပြည့်စုံသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုလည်း ပြုလုပ်သင့်သည်။
သွန်းလုပ်ရာတွင် အဓိကအသုံးပြုသည့် သယ်ဆောင်သူများသည် ရေ၊ အယ်လ်ကိုဟောနှင့် ကလိုရင်းပါသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင်၊ စျေးနှုန်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကြောင့် ကလိုရင်း ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ကို အပေါ်ယံအလွှာ၏ သယ်ဆောင်သူအဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး ယေဘူယျအားဖြင့် ရေကိုအခြေခံသည့်အပေါ်ယံလွှာနှင့် အရက်ကိုအခြေခံသော အလွှာများဖြစ်သည်။
American Standard Fittings များ, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, Hose With Coupling, လျောက်ပတ်တယ်။, Hinged Pipe Clamp,